Umklamo Omangalisayo Wokumamatheka Kwedijithali | I-OptiSmile ™ Advanced Dentistry
ukwakheka kokumamatheka kwedijithali
Ubuchwepheshe bamazinyo obuthuthukisiwe
Yini obungayenza uma ubumomotheka kahle?
IDigital Smile Design (DSD) yindlela lapho thina kwa-OptiSmile sisebenza neziguli zethu ukuthola umbono ongcono wendlela engcono yokwenza ngcono ukubukeka kwamazinyo abo. Sisebenzisa lobu buchwepheshe ikakhulukazi lapho sizosebenza kakhulu ekwakheni ukwakhiwa kwamazinyo okuhle kakhulu kweklayenti ngalinye, kepha futhi nezinqubo ezincane ezinjengokuthi uma umqhele udinga ukushintshwa. Ukufakwa kwamazinyo kanye nama-veneers kungakushintsha ngokuphawulekayo ukubukeka kobuso bakho ngakho-ke kubalulekile ukuthi ube nokuqonda okungokoqobo ongakufinyelela.
IDigital Smile Design (DSD) yindlela lapho thina kwa-OptiSmile sisebenza neziguli zethu ukuthola umbono ongcono wendlela engcono yokwenza ngcono ukubukeka kwamazinyo abo. Sisebenzisa lobu buchwepheshe ikakhulukazi lapho sizosebenza kakhulu ekwakheni ukwakhiwa kwamazinyo okuhle kakhulu kweklayenti ngalinye, kepha futhi nezinqubo ezincane ezinjengokuthi uma umqhele udinga ukushintshwa. Ukufakwa kwamazinyo kanye nama-veneers kungakushintsha ngokuphawulekayo ukubukeka kobuso bakho ngakho-ke kubalulekile ukuthi ube nokuqonda okungokoqobo ongakufinyelela. IDigital Smile Design icubungula isimo samanje samazinyo akho, okulindeleyo namakhono obuchwepheshe atholakalayo ukukhiqiza into ebonakalayo yokumamatheka kwakho okusha. I-DSD, empeleni, ikuvumela ukuthi ube ngumdidiyeli wokubambisana kokumamatheka kwakho okusha.
Thola okuningi nge-grin yakho
Yibuphi Ubuchwepheshe Obusetshenziswa yi-OptiSmile?
Sisebenzisa ubuchwepheshe obuphambili beCEREC CAD / CAM. Lokhu kusivumela ukuthi sithathe izithombe ze-3D zomlomo wakho noma izinyo futhi silungise izithombe ziye kokudingekayo, noma ngabe lokhu kungumqhele ophelele, ama-veneers, ukugcwaliswa noma ukufakelwa kwamazinyo.
Ngabe uhlangabezana nenkinga yamazinyo engaphezu kwengu-1?
Ngaphambi kokumamatheka okuhle, udinga onempilo.
Ngokuya ngalokho odinga ukukwenza, le nqubo ingashesha ngokweqile. Isibonelo, kungenzeka ukuthi usike izinyo le-ceramic ngemizuzu engama-30 nje emagcekeni ethu, uma kudingeka.
Sisebenzisa ubuchwepheshe beCEREC CAD / CAM njengoba busivumela ukuthi senze umsebenzi ku- izinga elincane ukunciphisa noma yikuphi ukuguqulwa kwamazinyo emvelo esiguli, ikakhulukazi uma veneers becatshangelwa.
Ithimba lethu lihlala likulungele ukukhuluma nawe ngenqubo, ngakho-ke woza uvakashele usithumele emahhovisi ethu amazinyo eKapa noma usithumelele imibuzo yakho online. Singabe sesikusiza ukukucebisa ukuthi yiziphi izinyathelo zakho ezilandelayo okufanele zibe.
Kungani iDijithali Smile Design Idume Kangaka?
IDigital Smile Design iguqula ubuso bezindlela zokwelapha zobuhle futhi isetshenziswa odokotela bamazinyo abaholayo emhlabeni wonke. Kuyisoftware ebonakalayo esiza odokotela bamazinyo ukuthi basebenze neziguli zabo ukubhekana nezinkinga zabo eziyinhloko zezimonyo futhi inqubo izohamba kanjena:
Ukubonisana kokuqala lapho izithombe zithathwa kanye nesikhunta sesimo samazinyo samanje, sizophinde sibuyekeze isimo samanje samazinyo akho ukuze sikhulume ngezinketho ezinhle kakhulu ongazithola kulesi sigaba
Imininingwane yesineke nemifanekiso kuyangezwa kwisoftware
Isoftware bese ivumela ukwakhiwa kabusha, ukufakwa kabusha umbala nokufakwa kwamazinyo alahlekile ngudokotela wamazinyo, ukubhekana nezidingo zesiguli
Okubonwayo okwakhiwe kabusha bese kudluliselwa esigulini esizokwazi ukuphindisela emuva kumklamo omusha wokumamatheka ohlongozwayo
Lapho isiguli sijabule ngokuphelele ngokumamatheka kwaso okusha, isikhunta nokwakhiwa okusha kuzodluliselwa elabhorethri yethu yamazinyo kanye nesikhunta esithathiwe
I-laboratory bese idala i-wax-up lapho senza khona isikhunta senjoloba esingabekwa emlonyeni weklayenti ukuthola imizwa eyiqiniso ngemiphumela ngaphambi kokuqala noma ikuphi ukwelashwa
Inqubo ye-Digital Smile Designs ngeke ihlale ibandakanya zonke lezi zinyathelo ezingenhla futhi kwesinye isikhathi ingashesha kakhulu, kuya ngobungako bomsebenzi odingekayo emazinyweni. Ukumane ubeke okufakwayo kwamazinyo, umqhele, ukuvezwa noma ukufakelwa kungenzeka kwenzeke ngesikhathi sokubonisana okufanayo, njengoba izinyo le-ceramic lingasikwa ngemizuzu engama-30 kuphela ngokususelwa ekwakhiweni.
Kungani Usebenzisa i-Digital Smile Design Technology?
IDigital Smile Design ubuchwepheshe obengezelayo bokubuyisela ukumamatheka okusiza isiguli ukuthi sisebenze nodokotela bamazinyo baso ukuthola ukubukeka okuhle kakhulu ngokuya ngokuthanda kwabo. Inzuzo yayo enkulu ilele ekutheni ivumela isiguli ukuthi sibone ukuthi ukumamatheka kwaso okusha kuzobukeka kanjani ngaphambi kokuqala noma ikuphi ukwelashwa kwamazinyo. Ngakho-ke uthola ukubona ukuthi ukumamatheka okusha kungenzeka kube nomehluko ongakanani oshintsha impilo. Lokhu kusiza kakhulu ezimeni lapho inqubo yokubuyiselwa kwamazinyo kungenzeka ukuthi ibanzi futhi ibize. Kodwa-ke, umkhuba wethu uhlose ukuhlinzeka ngezinsizakalo zokubuyiselwa kwamazinyo ngokushesha.
Thola Okuphelele Nge-Grin Yakho